चिनीमा समस्याको चाङ- विचार - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २, २०७५ सम्पादकीय
काठमाडौँ — लाखौं किसान, श्रमिक र उद्योगीको रोजीरोटीसँग जोडिएको चिनी उत्पादन क्षेत्र वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त छ । उद्योगले भारत तथा पाकिस्तानबाट आयातीत चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर आफ्नो उत्पादन थन्क्याउनुपर्ने, किसानले चिनी उद्योगबाट उखुको उचित मूल्य र भुक्तानी नपाउने यस क्षेत्रमा अहिले देखिएका मुख्य समस्या हुन् ।
यो समस्याले उद्योगी र किसानबीच द्वन्द्व पनि बढाएको छ । समस्या बर्सेनि चुलिँदै गइरहे पनि सम्बोधन गर्न सरकारले अग्रसरता लिएको पाइँदैन । सरकारको यस्तो उदासीनताका कारण स्वदेशी चिनी उद्योगहरू नै बन्द हुने र यसको कच्चा पदार्थ उखुको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका किसान मर्कामा पर्ने जोखिम देखिएको छ । यसबाट चिनी आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएर मुलुकको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने अवस्था आउँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटिरहँदा उपभोक्ताले यही किचलोका कारण सस्तोमा किन्न पाइरहेका छैनन् ।
किसान र उद्योगीका लागि उत्पादन लागत घटाउने नीति सरकारले ल्याउन नसक्दा स्वदेशी चिनी आयातीत चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । भारत र पाकिस्तानमा मलखादमा अनुदान तथा सिँचाइ सुविधालगायतका कारण उत्पादन लागत कम छ भने त्यहाँका सरकारले निर्यातमा पनि सहुलियत दिएका छन् । भारतले पछिल्लो समय चिनी निर्यातमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत शुल्क हटाएपछि भारतीय चिनी थप सस्तिँदै छ । उत्पादन लागतका कारण नेपाली चिनी तुलनात्मक रूपमा महँगो हुँदा भारतीय र पाकिस्तानी चिनीको बजार बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा करिब २ करोड ७३ लाख किलो चिनी आयात भएकामा २०७३/७४ मा करिब ६ करोड २४ लाख र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामै करिब ८ करोड ८६ लाख किलो चिनी आयात भएको छ । नेपाली चिनी भने महँगो भएर गोदाममै थन्किएकाे छ ।
उपभोक्ताको रोजाइ स्वाभाविक रूपमा सस्तो वस्तु नै हुन्छ । स्वदेशी उद्योग र किसानलाई राहत दिने नाममा सस्तो चिनी आयात प्रतिबन्ध लगाउनु उचित विकल्प हुन सक्दैन । अहिले उद्योगीहरूले सरकारसँग चिनी पैठारीमा भन्सार दर बढाउनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन् । तर यसले बजारमा चिनी महँगो पर्न गई उपभोक्तालाई मर्का पर्नुका साथै कालोबजारी बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैले स्वदेशी उद्योगी र किसानले लागत मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा चिनी किन्न सक्ने स्थिति हुने गरी सरकारले नीति तर्जुमा तत्काल गर्न अत्यावश्यक छ । कच्चा पदार्थ उखुको उत्पादन लागत घटाउन र चिनीको मूल्य निर्धारणमा बढी मुनाफा राख्ने प्रवृत्ति रोक्न सके चिनी उपभोक्ताकहाँ सस्तोमा पुग्न सक्छ ।
अहिले भारतीय र पाकिस्तानी चिनीको बजार मूल्यभन्दा बढी दरमा उखुका लागि मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उद्योगीको भनाइ छ । मलखाद र सिँचाइको समस्याका कारण उखु उत्पादनमा किसानको लागत बढी हुने गरेको छ । सीमापारिका किसानले मलखादमा सरकारी अनुदान र सिँचाइ सुविधाका कारण वारिका उद्योगलाई उखु बेचिदिँदा नेपाली किसान मर्कामा पर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले सरकारले यहाँका किसानका लागि पनि उन्नत बीउबिजन तथा मलखादको सहज उपलब्धता र सिँचाइ सुुविधामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सँगै, किसानलाई आधुनिक खेती प्रणालीतर्फ र उद्योगलाई प्रविधि सुधारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
उखुको मूल्य निर्धारण र भुक्तानी प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । मूल्य निर्धारण र भुक्तानीको विषयलाई लिएर वर्षौंदेखि उखु किसान र उद्योगबीच विवाद चल्दै आएको छ । विवादले आन्दोलनको रूप लिइरहँदा पनि चिनीको उत्पादन लागत बढ्न सक्छ । प्राय: उद्योगहरूले उखु लिइसकेपछि मात्र मूल्य तोक्नाले किसानमा चरम असन्तुष्टि देखिन्छ । धेरैजसो उद्योगले वर्षौंदेखिको उखुको भुक्तानी दिएका छैनन् । किसानले उखुको भुक्तानीका लागि हारगुहार गरिरहनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले बेलैमा उद्योगहरूले उखुको यथोचित मूल्य बेलैमा तोक्ने र भुक्तानी पनि नियमित गर्ने पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ । उद्योगीलाई वर्षौंदेखि मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) मा छुट दिइएको छ । तर यसले समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन । भ्याट छुट दिँदा सरकारी राजस्व गुमिरहेको छ तर किसान, उद्योगी र उपभोक्ताका समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् । त्यसैले मुहानमै सुधार गर्नुपर्छ । त्यो भनेको अब किसानलाई नै अनुदान बढाउनुपर्छ । सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत उखुको व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गर्दै बजार व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिनसके चिनी उपभोक्ताकहाँ सस्तोमा पुग्न सक्छ र मुलुक पनि चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, बन्नुपर्छ ।
प्रकाशित : वैशाख २, २०७५ ०७:४८
लोकनायक सलहेस र नयाँ वर्ष
सलहेसको नाम र सम्मानबारे व्यापक प्रचार–प्रचारको चाँजो राज्य पक्षले मिलाए समाजमा समानता, सम्मान, समरसता र सम्पन्नता बढ्दै जाने निश्चित छ ।
वैशाख २, २०७५ धीरेन्द्र प्रेमर्षि
काठमाडौँ — समाज सुधार र लोककल्याणका यावत् पक्षहरूलाई सांस्कृतिक संरक्षण दिँदै आएको मिथिलामा पर्यावरणीय पक्षलाई पनि संस्कृतिद्वारा नै संरक्षण दिइएर होला– विक्रमी नववर्षको शुभकामना पनि प्रकृति स्वयंले नै दिने गर्छ ।
नववर्षकै दिन मिथिलामा मनाइने जुडशीतलमा सरसफाइ तथा जीव–वनस्पति सबैलाई संरक्षण दिने सन्देशरूपी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएबाट प्रकृतिले पनि त्यहाँ आफ्नो अलौकिक चरित्र देखाउने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष वैशाख १ गतेका दिन मात्र एक ऐतिहासिक वाटिकामा फुल्ने गुच्छा आकारको फूललाई मिथिलावासीले प्रकृतिद्वारा प्रदान गरिएको नववर्षको शुभकामनाकै रूपमा लिने गर्छन् । सलहेस फूलबारी नामक उक्त वाटिकामा फुल्ने त्यो फूल मिथिलाका लोकनायक सलहेस गाथासँग सम्बन्धित छ । स्थानीय लोकआस्थासँग जोडिएको यस अलौकिक स्थानमा दशकौँदेखि भव्य मेला लाग्ने गर्छ ।
राजा सलहेस मिथिलाका यस्ता विभूति हुन्, जसको नामबाट त्यहाँका जनजन सुपरिचित छन् । अचेलको आधुनिकतातर्फ उन्मुख समाजमा पढेलेखेका मानिस भलै सलहेसको नामबाट अपरिचित होऊन्, तर अशिक्षित वा अल्पशिक्षित समुदायमा राजा सलहेसलाई नचिन्ने र श्रद्धा नगर्ने कोही छैनन् ।
वास्तविक नाम जयवद्र्धन रहेका सलहेसलाई सातौँ–आठौँ शताब्दीका महापुरुषका रूपमा चिन्ने गरिएको छ । मूलत: लोकगाथाका नायकका रूपमा रहेकाले यिनीबारे पर्याप्त अध्ययन हुन सकेको छैन । हालको समयमा सलहेसलाई एक खास जातिमा सीमित पारिएको, उक्त जातिलाई दलितमा दरिएको र दलितहरूको समुचित पहुँच शिक्षा तथा अध्ययन–अनुसन्धानका क्षेत्रमा हुन नसकेकाले पनि यिनीबारे खासै ऐतिहासिक अध्ययन हुन नसकेको हुन सक्छ । तथापि मैथिली लोकगाथाबारे पर्याप्त कार्य गरेका डा. व्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म, मतिनाथ झा, डा. पूर्णानन्द दास, राजेश्वर झा आदि इतिहासकारले केही अध्ययन गरेका छन् । मणिपद्मले यिनलाई पाँचौँ–छैटौँ शताब्दीका भने पनि महेन्द्र मलंगियाले विभिन्न तर्कका आधारमा सातौँ–आठौँ शताब्दीका मानेका छन् । तर समस्त भारतीय आर्यभाषामध्येकै पहिलो गद्यग्रन्थ मैथिली भाषाको ‘वर्णरत्नाकर’ मा तत्कालीन मिथिलाका समस्त वैशिष्ट्यहरूको उल्लेख भए पनि सलहेसबारे कुनै जानकारी नपाइनुले कतिपय विद्वान्हरू सलहेसलाई चार–पाँच शताब्दीअघिका मात्र पनि भन्दै छन् ।
सलहेसका नामका सन्दर्भमा विद्वान्हरूको मतानुसार यो ‘शैलेश’बाट अपभं्रश हुँदै सलहेस हुन गएको हो । शैलेश अर्थात् पर्वतका राजा । जातिचाहिँ दुसाध । दुसाध शब्द ‘दोसाँध’बाट अपभ्रंश भएर बनेको हुन सक्ने मान्यता छ । अर्थात् यिनी पहाड र मधेसको दोसाँधमा रहेको राज्य तिरहुत (मिथिला) का राजा थिए । हाल पनि सलहेससँग सम्बद्ध स्थानहरू सिरहा जिल्लाको मानिक दह, सलहेस फूलबारी, पकडियागढ, कमलदह आदि, धनुषाको ननमहरी, उदयपुरको त्रिवेणी आदि ठाउँलाई झन्डै–झन्डै पहाड र मधेसको दोसाँध भनिदिए फरक परोइन ।
मिथिलाको विस्तृत सांस्कृतिक फलकले आफूमा अनेकानेक विशिष्टता सँगालेको पाइन्छ । यसै सांस्कृतिक विशिष्टताअन्तर्गत मिथिलामा पाइने लोकगाथाको प्राचुर्यलाई पनि एक मान्न सकिन्छ । पछिल्ला समयमा श्रव्य–दृश्य सामग्रीका रूपमा यी लोकगाथा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । यस्ता लोकगाथाका नायकमा राजा सलहेसको नाम सबैभन्दा पुरानो तथा अग्रगन्य छ । सलहेसको गाथागीत तथा नृत्य हेर्न भनेपछि मिथिलाका नरनारीले दिनभरको थकाइलाई चटक्कै बिर्सेर रात छ्याङ्गै काटिदिन्छन् । सलहेस मिथिलाका आम मानिसको मन–प्राणमा बसेका छन् । त्यसैले तथाकथित तल्लो भनेर चिनिने दुसाध जातिका भएर पनि यिनी मिथिलामा लोकदेवताका रूपमा स्थापित छन् र हरेक वर्ग तथा जातिका मानिसले उत्तिकै श्रद्धा, भक्तिपूर्वक यिनको पूजा गर्छन् ।
मिथिलाको मैदानी भूभाग कृषि उत्पादन र पशुधनका दृष्टिले समृद्ध थियो । मिथिलाको सिमाना तीनतिर कोसी, गण्डक र गंगा नदीले घेरिएको हुनाले सुरक्षाका दृष्टिले यताबाट कुनै समस्या थिएन । तर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रबाट तिब्बत र भुटानको वक्रदृष्टि भने निरन्तर रहने गथ्र्यो । यसमा मिथिला क्षेत्रकै एक खुंखार दस्यु (डाँका) चुहड मलको उनीहरूलाई सहयोग उपलब्ध हुने गथ्र्यो । यस्तो समयमा सलहेसले किरातहरूसँग मिलेर संयुक्त फौज निर्माण गरे र चीनका शानवंशी सम्राटका पालामा मिथिलामा हुन लागेको आक्रमणलाई विफल तुल्याए भन्ने उल्लेख इतिहासकारहरूले गरेका छन् । सलहेसको समयमा मिथिला र किरातबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको सलहेसका सेनापति केवल किरात नामक व्यक्ति हुनुले प्रमाणित गर्छ । सोही कालखण्डको अर्का गाथा नायक दिना–भद्रीको अनन्य सहयोगीका रूपमा जोगमल किरात रहेको प्रसंगले पनि यस तथ्यलाई बल प्रदान गर्छ ।
सलहेस मूलत: पराक्रम, पौरख र प्रेमका लागि चिनिन्छन् । जंगली जनावरहरूलाई पनि सजिलै सम्मोहन गर्न सक्ने खुबी भएका व्यक्तित्वका रूपमा सलहेसलाई गाथाहरूमा चित्रण गरिएबाट यिनको समय गौचर र कृषि युगको बीचको थियो भन्ने पनि अनुसन्धाताको भनाइ छ । अहिले पनि मिथिलाञ्चलमा वन–जंगलमा कुनै कुराको डर लाग्दा मान्छे मनमनै सलहेसलाई सम्झन्छन् र यसो गर्दा डर भाग्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् ।
सलहेस आफ्नो समयका अत्यन्त न्यायप्रेमी शासक थिए । जनताको पीरमर्का सुन्न यिनी नियमित जनसभा गर्ने गर्थे, अर्थात् नियमित रूपले जनताको गुहार सुन्थे । न्यायको प्रतिमूर्तिका रूपमा रहेका हुनाले नै यिनीमाथि सबै जातिले विश्वास गरेका थिए र यिनी सबैको प्यारा राजा थिए । प्रखर योद्धासमेत रहेका सलहेसका वंशजहरू कालान्तरमा दलितमा दरिए पनि यिनीप्रति सबैको श्रद्धा र भक्तिभाव भने कायमै छ । र यिनलाई राजाकै रूपमा लोकले स्वीकार गरेको छ । त्यसैले सलहेसलाई ‘राजाजी’ भनेर सम्बोधन गर्ने प्रचलन पनि मिथिलामा पाइन्छ । सलहेस फूलबारीलाई राजा फूलबाइर पनि प्राय: त्यसै कारणले भन्ने गरिएको हो । यिनको राजधानी महिसौथा गढमा थियो । यो ठाउँ हाल सिरहा जिल्लाको सदरमुकाम सिरहा नगरपालिकामा पर्छ ।
राजा सलहेससँग सम्बद्ध अधिकांश ऐतिहासिक स्थलहरू पूर्वी नेपालको सिरहा जिल्लामा पर्छन् । सलहेस फूलबारी सिरहाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र लहान बजारदेखि तीन किलोमिटरजति पश्चिमतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउमा पर्छ । प्रत्येक वर्ष वैशाख १ गते त्यहाँ भव्य मेला लाग्ने गर्छ । भारतबाट समेत लाखौं श्रद्धालु तथा रमितालु मेला भर्न र आफ्ना लोकदेवता सलहेसको दर्शन–पूजन गर्न सलहेस फूलबारीमा ओइरिने गर्छन् ।
सो फूलबारी अनेक किसिमका अतिक्रमण सहँदा–सहँदै पनि अहिलेसम्म एउटा सानो जंगलका रूपमा अस्तित्वमै छ । जंगलको मध्यभागतिर एउटा रूखमा बीच हाँगामै कसैले थपक्क लगेर झुन्डयाइदिएजस्तो गरी एउटा सेतो माला आकारको फूल फुलेको हुन्छ । त्यो फूलको आकर्षण र रूप त लोभलाग्दो हुन्छ नै, त्यसका सम्बन्धमा अन्य कुरा पनि कम रोचक र अनौठा छैनन् । वनस्पतिविद्हरूले अर्किडको फूल भन्ने गरेको उक्त फूल फुल्ने रूखलाई भने स्थानीयले हारमको रूख भन्ने गरेका छन् ।
त्यस परिसरका आम–मानिसको भनाइअनुसार त्यो फूल सलहेस फूलबारी मेला लाग्ने दिन अर्थात् वैशाख १ गते मात्र फुल्ने गर्छ । एक दिनअघि सो फूल कोपिलाका रूपमा देखिन्छ भने एक दिनपछि चाहिँ ओइलाएको रूपमा देखिन्छ । अन्य कुनै दिन सो फूल कहिल्यै नदेखिएको स्थानीय बताउँछन् र प्रकृतिको यस अनौठोपनालाई उनीहरू दैवीशक्तिको संज्ञा दिन्छन् । उक्त फूलबारे अनुसन्धान गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । यद्यपि सलहेस गाथाको प्रभावमा रंगिएकाहरू भने सलहेसकी प्रेमिका कुसमा मालिनी सलहेसको दर्शन गर्न भनी फूलका रूपमा उक्त दिन प्रकट हुने गरेको विश्वास व्यक्त गर्छन् । यस मान्यताका आधारमा त्यहाँ गई दर्शन तथा पूजन गरेमा प्रेमी–प्रेमिकाको मनोकामना पूर्ण हुने विश्वास पनि बढ्दै गएको छ । सलहेस फूलबारीकै पन्ध्र किलोमिटर जतिको सेरोफेरोमा सलहेससँग सम्बद्ध अन्य ऐतिहासिक स्थान पनि छन् । उत्तरतर्फ मानिक दह छ भने पूर्वोत्तर कुनामा पकडियागढ छ । यी ठाउँमा पनि क्रमश: वैशाख १ र २ गते भव्य मेला लाग्ने गर्छ । राजा सलहेसको जन्मथलो महिसौथा सिरहाको सदरमुकाम सिरहामै छ । त्यहाँ सलहेसको मन्दिर पनि छ । उक्त स्थानलाई महिसौथागढ भन्ने गरिन्छ ।
सम्भवत: सिंगै देशमा कुनै पनि यस्ता दलित इतिहास–पुरुष छैनन् होला, जसको समाजका सबै वर्ग, जाति, समुदायद्वारा समान श्रद्धा र निष्ठाका साथ यति भव्यतापूर्वक पूजा गरिँदो होस् । नववर्षको रमझमलाई समेत बेवास्ता गरी सलहेसको दर्शन तथा पूजनका निम्ति मानिसले देखाउने व्यग्रता र उत्सुकता मननीय देखिन्छ ।
सरकारी स्तरबाट दलित वर्गलाई सम्मान दिने कार्यका रूपमा मात्र भए पनि सलहेसबारे आधिकारिक अध्ययन/अनुसन्धान गराई उनका पुण्यस्थलहरूमा लाग्ने मेला आदिको विकासतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सलहेसको नाम र सम्मानबारे आमजनमा व्यापक प्रचार–प्रचारको चाँजो राज्यपक्षले मिलाए समाजमा समानता, सम्मान, समरसता र सम्पन्नता बढ्दै जाने निश्चित छ । अबको समयमा खास गरी मिथिला क्षेत्रको समस्त गौरव विरासतमा पाएको प्रदेश २ ले यस्ता सम्पदाको पहिचान गरी यथोचित स्थान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय दलित आयोगजस्ता दलित सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाबाट पनि विशेष पहलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल मिथिलाबासीले मात्र मान्दै आएका सलहेसलाई सम्पूर्ण दलित समुदायले आफ्नो गौरव पुरुषको रूपमा अंगीकार गर्नसके यसबाट देशका विभिन्न समुदायबीच समन्वय बढाउन मद्दत मिल्ने छ। साथै, मिथिलाञ्चलमा दलित वर्गका कुनै व्यक्तिले ऐतिहासिक आधारमा कुन हदसम्मको सम्मान पाएका रहेछन् भन्ने विश्वलाई सन्देश दिन महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्न सक्नेछ ।